redesigned ipad mini 6 idonhedza ne ipad mweya-senge dhizaini, usb-c, zvimwe zvakawanda
Kuru Nhau & Ongororo Yakagadzirwazve iPad mini 6 kudonha nePad Mhepo-senge dhizaini, USB-C, zvimwe zvakawanda
Yakagadzirwazve iPad mini 6 kudonha nePad Mhepo-senge dhizaini, USB-C, zvimwe zvakawanda
Kunze kwekuzorodza muna 2019 iyo yaisanganisira chipset nyowani uye Apple Penzura rutsigiro, iyo mini mini iri kunge rakanyatso kuregedzwa kubvira 2015. Kudonha uku, uko kunoratidzika kunge kuchachinja nekugadziriswazve iPad mini 6 izvozvi zvave kuratidzwa zvizere.
Iyo iPad mini 6 inonyanya iri diki iPad Mhepo 4
Tipster Jon Prosser, uyo munguva yakapfuura akaburitsa Apple & apos; s AirTags uye iMac mavara, ane rakabudiswa renders yeiyo iri kuuya iPad mini 6 iyo inonzi inofungidzirwa pamubatanidzwa we schematics, maCAD mafaera, uye kunyange maoko-pamifananidzo yeiri kuuya Apple piritsi.
Iyo mifananidzo iri mubvunzo inoratidza iyo iPad Mhepo-senge dhizaini ine aluminium inovaka uye imwe kamera mune yepamusoro-kuruboshwe kona yepashure pepaneru. Iyo yekumberi, kune rumwe rutivi, inotora yese-skrini dhizaini ine yakaenzana matete bezels.
Mitauro yekugadzira inoenderana zvakakwana ne changobva kuitika kubva kuna Mark Gurman, iyo yakati iyo iPad mini 6 yaive kuyedzwa ne 'yakamanikana miganhu' yakatenderedza kuratidzwa uye isina yechinyakare Kubata ID pamba bhatani.
Kunyangwe paine shanduko, Apple haisi kudonhedza Kubata ID uye kuchitsiva neFace ID sezvayakaita pane iyo Pro Pro. Panzvimbo iyoyo, iyo yekubata ID sensor inonzi yakabatanidzwa mubhatani remagetsi, zvakanyanya sezvakaitwa naApple neiyo iPad Mhepo (2020) gore rapfuura.
Dzimwe shanduko dzinosanganisira switch kune USB-C kubva kuMheni, iyo inonyanya kufadza nekuti Apple kusvika parizvino yakachengetera yepamusoro-soro, chiteshi chepasi rose cheiyo iPad Pro mutsara. Vatauri vanonzi vakagadziridzwa zvakare. Chinyorwa chaProsser chinoti ruzivo rwekuteerera parizvino 'rwunopenga,' kunyangwe panguva yenguva yekunyora hapana zvimwe zvinhu zvakange zvagoverwa.
Chekupedzisira, zvakakodzera kunongedzera kuti iyo hombe kuratidzira haina kukanganisa iyo compact saizi yehwendefa. Nhasi & apos; s kudonha kunoti iyo iPad mini 6 zviyero mukati pa206.3mm x 137.8mm x 6.1mm, chete zvishoma zvishoma pane iyo iPad mini 5 (203.2 x 134.8 x 6.1 mm).
Apple iri kuronga idiki Apple Penzura yeiyo iPad mini 6?
Kunge iPad mini (2019), iri kuuya mini mini 6 inotsigira iyo Apple Penzura chinyoreso seyakajairwa. Nekudaro, iyo Silicon Valley-yakavakirwa hofori inonzi iri kushanda pachirongwa chakagadzirwazve icho & apos; diki pane iyo Apple Penzura 2.
Prosser anofungidzira kuti iyo nyowani vhezheni inogona kuve yakagadziridzwa Apple Penzura 3 izvo zvakaburitsa kanoverengeka pakutanga kwegore rino. Kuyera stylus yazvino kunopesana nemifananidzo yakabuda yeiyo nyowani, zviri pachena kuti Apple iri kushanda pane chimwe chinhu chidiki.
Izvo & apos; zvisina kujeka ndezvekuti iyo & apos; yakasarudzika Apple Penzura yakagadzirirwa chaizvo iyo iPad mini 6, kana inotevera-chizvarwa vhezheni iyo & apos; iyo inongobudirira iyo Apple Penzura 2 uye inoshanda nemhando imwecheteyo iPad mhando. Chero nzira, haifanire & apos; kureba kusvika Apple yajekesa zvinhu.
Apple iPad mini 6 chiziviso, zuva rekuburitsa, uye mavara
Iyo iPad mini 6 inotarisirwa kutanga kudonha uku padivi pe iPhone 13 uye Apple Yekuteedzana 7 . Apple haina & apos; yakasimbisa musi wechiitiko chayo chinotevera, asi nhoroondo inoratidza kuti ichaitwa neChipiri, Gunyana 7.
Kana zvirizvo & apos; sizvo chaizvo, vatengi vanogona kutarisira kuisa maoko avo paiyo mini mini 6 nekukurumidza Chishanu, Gunyana 17. Izvo & apos; ingori fungidziro yakadzidziswa, zvakadaro, uye mukana wekunonoka haugone kubviswa. padanho rekutanga zvakadaro.
Iko hakuna & apos; hapana izwi pamutengo parizvino, asi nhasi kuvuza kwakaburitsa mwenje paApple & apos; s zvirongwa zvemavara - iyo iPad mini 6 ichave ichizowanikwa muSilver, Space Grey / Graphite, uye Goridhe.
renyeredzi tarisa lte vs bluetooth
zvishongedzo zve iphone 12 pro max
5 kuchaja uye dhata tambo dzinoshanda neese maApple uye iOS zvishandiso
Samsung Galaxy S III Mini yakazara zvizere, mutengo uye zuva rekuburitsa zvinobuda
PSA: OnePlus 5T yakakunda & apos; haishande paVerizon uye Sprint